Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Safe Ethiopian Airlines Operation on the Edge?
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany momba an'i Ethiopia • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao
Mihenjana kokoa isan'andro ny ady an-trano ao Etiopia. Ny Ethiopian Airlines dia marika mirehareha ho an'ny Afrikana. Ny fandrahonana atao amin'ny haavon'ny fiarovana an'ny ET dia mampatahotra ny maro eto amin'ny kaontinanta sy eo amin'ny tontolon'ny sidina. Loza mitatao ho an'ny toekarena afrikanina maro ihany koa izany.
Tsy hohadinoin’ny Afrikanina mihitsy ny fianjeran’ny Boeing 737 Max tao Ethiopia ary ny fomba nirohotra ny fampahalalam-baovao tandrefana nanome tsiny ireo mpanamory fiaramanidina Etiopiana! Androany i Boeing dia voamarina ho antoko meloka, ary niova ny feon'ny haino aman-jery.
Androany i Etazonia dia mampitandrina ireo mpanamory momba ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Addis Abeba ho tsy azo antoka noho ny herin'ny TPLF TerroristGroup! Tsy misy vondrona mitam-piadiana afaka manao diabe ao Addis Abeba! Tsy misy vondrona mitam-piadiana afaka manao izany.
Ity sy hafatra maro hafa dia manondraka ny fantsona media sosialy. Ny zava-misy dia mbola Etazonia ifampitandremana ireo mpanamory fa ny fiaramanidina miasa any amin'ny iray amin'ireo seranam-piaramanidina be mpampiasa indrindra ao Afrika dia mety "miharihary mivantana na ankolaka amin'ny fitifirana fitaovam-piadiana sy/na balafomanga ety ambonin'ny tany" Adin'i Etiopia akaikin’ny renivohitra, Addis Abeba.
Eo amin'ny sisiny ny Etiopiana noho ny fampitandreman'i Etazonia sy ny fampitandreman'i Amerika ho an'ny Amerikanina handao ny firenena.
Ny hafatra dia: Aza mampiasa Ethiopian Airlines. Ny bitsika dia milaza fa ny tanjon'i Amerika dia ny hampandringa ny toekaren'i Etiopia. ady tsy nambaran'i USA izany!!!
Ny torohevitry ny Fitondram-pitantanan'ny Aviation Federaly navoakan'ny Alarobia dia mitanisa ny “fifandraisana mitohy” eo amin'ny tafika Etiopiana sy ny mpiady avy any amin'ny faritra avaratr'i Tigray, izay nahafaty olona an'arivony tao anatin'ny herintaona nisian'ny ady. Ny Etazonia tamin'ity herinandro ity dia nanentana ny olom-pireneny ao Etiopia mba "hiala izao", ary nilaza fa tsy tokony hisy ny fiandrasana ny fialana amin'ny fomba Afghanistan.
Nihaona tamin'ny fanoherana ny ezaka diplaomatika hampitsaharana ny ady, fa ny filohan'i Kenya dia nilaza tamin'ny sekreteram-panjakana nitsidika an'i Etazonia Antony Blinken tamin'ny alarobia fa ny praiminisitra Etiopia tamin'ny fivoriana tamin'ny alahady dia nanome fahatsapana fa vonona ny handinika tolo-kevitra maromaro hanalefahana ny fihenjanana sy hampihenana ny herisetra. hoy ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Departemantam-panjakana.
Mandritra izany fotoana izany, ireo bitsika avy any Etiopia dia mitaky ny hanajanonan'i Etazonia ny fampitahorana ny olona, ​​milaza fa tsy misy ahiahy i Addis Abeba.
Ny bitsika hafa dia manoro hevitra ny Vondrona Afrikanina monina any Addis Abeba mba hanangona entana sy hifindra any amin'ny firenena afrikanina hafa.
Ny filohan'ny komity fizahan-tany afrikanina Cuthbert Ncube Hoy izy: “Imbetsaka aho no nanidina tamin'ny Etiopiana namakivaky an'i Addis Abeba tato anatin'ny andro vitsivitsy ary nihaona tamin'ny tompon'andraikitry ny zotram-piaramanidina.” Tsy misy loza mananontanona, ary ny mpitarika ny Ethiopian Airlines dia tokony hatoky amin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo hampandeha soa aman-tsara ny zotram-piaramanidina. ”
"Manantena aho fa azo ialana ny fisondrotan'ny ady an-trano"
freddy L kober hoy:
November 21, 2021 amin'ny 13: 34
Olona an'arivony no efa maty. Tplf dia saika any Addis Abeba dia eo amin'ny 100 kilometatra miala eo. Ny Tafika Oromo Libartion dia mipetraka eo ivelan'ny renivohitra miandry ny Tplf fotsiny mba hahafahan'izy ireo miditra ao amin'ny capitol amin'ny lafiny samihafa. Nosamborin'izy ireo ihany koa ireo Tigrayan ao amin'ny kapitoly saingy lazain'izy ireo fa azo antoka izany.
PM velona lala tany rendrika ny sambony ka hampidina ny olona tsara tarehy miaraka aminy.
Jenny Brown hoy:
November 21, 2021 amin'ny 05: 16
Koa nahoana eto ambonin'ny tany no hisy hieritreritra fa azo antoka ny manidina any amin'ny faritra misy ady? Hitantsika.
November 21, 2021 amin'ny 05: 15
Koa nahoana eto ambonin'ny tany no hisy hieritreritra fa azo antoka ny manidina any amin'ny faritra misy ady? Adala ve isika vahoaka manidina?